Vista Del Lago, B (1 Villa), 5.0 * UKUHLOLA. - I-Airbnb
Vista Del Lago, B (1 Villa), 5.0 * UKUHLOLA.
Igumbi lakho lokulala sinombuki zindwendwe onguSai
USai ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uSai iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ugqibele nini ukonwabela ubuhle bamanzi amenyezelayo ukusuka kubutofotofo bebhedi yakho? Ugqibele nini ukufumana ubunewunewu obungama-2560ft ngaphezu komphakamo wolwandle?
IVista Del Lago likhaya lokwenyani leeholide ezininzi zelizwe eliphefumlelwe zezona zibalaseleyo kwihlabathi liphela. I-architecture yodidi lwaseSpain, iithayile ezintle eziphefumlelweyo zasePortugal, kunye nedama elimangalisayo eliphezu kophahla.
Uluhlu lolwe-1 kwi-3 yeevillas / iindlwana zaseVista Del Lago (Ibhedi eyongezelelweyo ibonelelwe ngesicelo).Sibonelela ngezindlu ezi-3 ezahlukeneyo ezineBalcony enechibi elihle kunye neNtabeni yokujonga. Sikwanayo negumbi labucala elinendlu yangasese encanyathiselweyo enebhedi ezi-3 zabantu abangabodwa.
Njengoko umntu unokuqikelela egameni, indawo yokugcina amanzi eKarapuzha isembindini wokusekwa kwethu. Igumbi ngalinye kwi-resort likunika umbono womzimba wamanzi ozolileyo kunye nobuhle bayo obuninzi. Asiyeki ukwenza umzamo wokugcina ubunyulu bedama; sisebenzisa inkunkuma efanelekileyo kunye nonyango lwamanzi ukuyigcina icocekile kangangoko kunokwenzeka. Njengoko indalo isembindini wonikezelo lwethu, sithatha onke amanyathelo okhuseleko ukuba sihambe sikhaphukhaphu kuphawu lokusingqongileyo njengoko sinako kwi-eco-system. Ukuza kuthi ga ngoku, bonke abasebenzi bethu ngabantu abaqhelene ngokusondeleyo nomhlaba, kwaye sithembele kumanzi emvula avuniweyo kunye nolimo olusulungekileyo lokufama ngokwemvelo ukuhlangabezana neemfuno zethu. Yinkolelo yethu eyomeleleyo yokuba njengoko indalo isikhathalela, ngumsebenzi wethu ofungelweyo ukukhathalela indalo.
Sizibophelele ekuboneleleni ngesibonelelo ngasinye umntu anokusilindela kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide, kwaye asithobelisi umgangatho. Indawo yokupaka eyaneleyo, iqela elonwabisayo labasebenzi abazinikeleyo, indawo yokutyela enezinto ezininzi zokutya ezinobumnandi obungekho ngaphantsi kwe-organic, siyakuqinisekisa ukuba siza kukonakalisa njengobukhosi. Ukubandakanywa kwazo zonke kungundoqo wefilosofi yethu, kwaye ngenxa yoko, ukusekwa kwethu kunobuhlobo ngokwahlukileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Sai
Siza kukwazi ukubonelela ngeyona nkonzo ilungileyo yokwamkela iindwendwe kulo lonke ixesha lokuhlala.